Ubuhle kunye nempilo Izinwele
Ukusabalalisa i-alopecia yenye yeendlela ze- alopecia , apho ukulahleka kweenwele ezifanayo kubonakala phezu kwendawo yonke yesibhakabhaka ngaphandle kokufa kwezinwele zezinwele. Olu luhlu luyabonakala kumadoda kunye nabasetyhini, kwaye ngokwemiqathango yokuxhaphaka okwesibini kuphela kwi-androgenetic alopecia.
Iimbangela kunye neentlobo ze-alopecia
Ukusabalalisa i-alopecia kubonisa ukuphazamiseka ekusebenzeni kwendalo yonke kwaye kubangelwa ukungaphumeleli kwenkqubo yokukhula nophuhliso lweenwele. Kukho iintlobo ezimbini zezi zifo-telogen kunye ne-anagen.
Ukusabalalisa i-alopecia ye-telogenic ifunyaniswa rhoqo. Ngale fom, ezininzi iinwele zeentloko (malunga ne-80%) ziyeke ukuvelisa iinwele, zingasishiyi masinyane kwisigaba sokuphumla (telogen). Izizathu zezi zi nokuba:
kutshitshiswa, uxinzelelo ;
ukungaphumeleli kwenkqubo ye-hormonal (ngenxa yokukhulelwa, isifo se-thyroid, intlawulo ye-hormonal, njl);
Ukusetyenziswa kwexesha elide lamachiza athile (i-antibiotics, i-antidepressants, neuroleptics, njl);
izifo ezinokugula ezingapheliyo kunye nezigulana;
Ukungabikho kwezizinto ezibalulekileyo emzimbeni.
Ukusabalalisa i-alogenic i-anagenic idibene nefuthe lezinto eziphakamileyo ezikhawulezileyo - imisebe yomsakazo, i-chemotherapy, inetyhefu kunye neetyhefu ezinamandla, njl. Ngenxa yoko, iinwele zeentloko azikho ixesha lokungena kwisigaba sokuphumla, kunye neenwele ziwela emva kwesigaba sokukhula (anagen).
Iimpawu zokusasaza i-alopecia
Ngaloo ntsholongwane, iinwele ziba buthathaka, ziphazamise kwaye zikhuphe ngaphandle kweminye imizamo. Ubuncwane bomzimba bubonakala kwi-intloko yomphezulu malunga nobukhulu obufanayo.
Ukunyangwa kwe-alopecia ekwahlukileyo kunciphisa, ngokuyisiseko, ukukhangela kunye nokupheliswa kwesizathu esibangele. Oku kufuna ukuxilongwa komzimba wonke. Emva kokunyamalala kwento engalunganga, iinwele zibuyiselwa kwiinyanga ezi-3 ukuya kwezi-9.
Kwakudinga ukunakekelwa okufanelekileyo kwe-scalp kunye neenwele, ukusetyenziswa kweemveliso zangaphandle ezichaphazela kakuhle iinwele zentlungu, ukuphucula ukujikeleza kwegazi kwisikratshi. Ukuze kuphuluke ngokukhawuleza, iindlela ezahlukeneyo ze-physiotherapy zisebenza. Inendima ebalulekileyo inikwe ukutya kokuzaliswa kwezinto ezilandelwayo kunye namavithamini.
Ukubala imibala emnyama
I-hydroxy peroxide kwizinwele ezingafunekiyo
Rivanol ngenjongo yokususwa kweenwele
Iingubo ze-haircuts kunye nama-bangs
Iibhulabhu zeebhulakhwe ezinwele
Ukuxhatshazwa - unyango kunye nezilwanyana zomntu
Uchaneka njani ukucoba i-axillas?
Indlela yokwenza iinwele zibe zikhuni?
Masks ukukhanya kweenwele
I-Plasmolifting yeenwele - yonke into ofuna ukuyifumana malunga nenkqubo
I-ELOS-epilation - ingqinano kunye nemiphumo
Supra ukunyusa iinwele
I-Photoepilation - ukuchasene nemiphumo
Kutheni abafazi belahlekelwa iinwele zabo?
UMila Kunis wachitha ixesha kunye nendodana ekhulile uDimitri kwindawo yokudlala eHollywood
Ukuqeqesha imisipha yasekhaya ekhaya
Sochi ihotele zonke ezibandakanya
Indlela yokugqoka isitayela kunye nexabiso?
Ubisi obuncitshisiweyo obuncitshisiweyo ngemizuzu engama-15
I-Husky - iimpawu zohlobo
Amaziko athengwa ePrague
Umdlalo we-Didactic "Ixesha Lonyaka"
Ingubo yokukhanya yabasetyhini - iifoto ezingama-44 zeemodeli ezinokwakheka kakhulu kwiintlobo zonke
Unganelisa njani umyeni wakhe?
Indlela yokuvula i-salon yobuhle?
Yintoni ibonakala ngathi ukhula lwentliziyo?
Iimpahla zokugcoba eziqhelekileyo - iingcamango zokuhlobisa kwangaphambili
Isilumkiso sejoni - Kulula kangakanani ukujamelana nesifo se-nervous?
Amakhanda ezinwele eziphathekayo
UKelvin Klein akazange amthande uKendall Jenner njengomzekelo
Ungazijonga njani i-breast gland?
Iingcango zeglasi zokuhlamba
© 2021 xh.unistica.com